ကျော်ခ| January 26, 2013 | Hits:7,706
| | ရနံ့သင်းထုံတဲ့ စကားဝါပန်းတွေ ပေါများသော ပုပ္ပါးတောင်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း မန္တလေးတိုင်း၊ မြင်းခြံခရိုင် ကျောက်ပန်းတောင်း မြို့နယ်ထဲမှာ ရှိပါတယ်။ မိုးခေါင်ရေရှားပြီး ပူပြင်းခြောက်သွေ့တဲ့ အညာဒေသဖြစ်တဲ့ မကွေး၊ နတ်မောက်၊ ရေနံချောင်း၊ ချောက်၊ ပခုက္ကူ၊ ပုဂံ-ညောင်ဦး၊ မိတ္ထီလာ၊ မြင်းခြံ၊ ကျောက်ပန်းတောင်း စတဲ့ နေရာတွေကြားထဲက တခုတည်းသော အမြဲစိမ်းတောလို့ ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။
“Vaiolenz Band က အကြမ်းဖက်မှုကို မလိုလားဘူး”၀က်မှေး၊ ၀မ်ပေါင်နဲ့ Documentary ပါဝါ
Nwe January 26, 2013 - 8:30 pm I still do not know what message this article is delivering. Is it about amage to the environment in the region because of people or about the monkeys who lived there for centuries and more recently they were facing starvation? Dont blame on the monkeys though. No moneys= no visitors to Popa.
Reply makee February 15, 2013 - 7:51 am Did i blame you?Sorry
Reply Nyunt Shwe January 27, 2013 - 5:20 am ပုပ္ဗါးတောင်ဟာ တောင်မကြီးကနေ ပဲ့ကျလာတဲ့တောင်မဟုတ်ဘူး။ အင်္ဂလိပ်လို ဗော်လ်ကဲန်းနစ် နက်က် (မီးတောင် လည်ပင်း) လို့ ခေါ်တယ်။ မြေအောက်ကနေ တောင်ထဲကနေ ထိုးတက်လာတဲ့ ကျောက်ရည်ပူတွေ ခဲပြီးကျန်ခဲ့တာပါ။ မရေးခင် ဘူမိဗေဒဌာနကို လှမ်းပြီးမေးမယ်ဆိုရင် အမှားကင်းတာပေါ့။ နောင် ဆင်ခြင်ဖို့ပါ။ အဲဒီအထိပဲ ဖတ်ပြီး ရေးလိုက်တာပါ။ ကျန်တာ နောက်မှ ဖတ်တော့မယ်။
Reply Shwe Yoe January 27, 2013 - 10:00 am Monkeys and ethnics are colonized by the Burmese junta.
Reply ko kyaw January 29, 2013 - 12:57 am ဒီအချက်အလက်က အမှားကြီးပါ…
Reply maung January 29, 2013 - 9:44 am The artical is written about Mount Popa and Monkeys life…..But the Geologist come and read here…and create problems…like the6Blinds and the elephant…hahaha….. this is Myanmar……